I-PRINCE2 Uqeqesho lweGurgaon | I-Prince2 Practitioner Certification
Uqeqesho lwe-PRINCE2 Uqeqesho kwiGurgaon | I-PRINCE2 Practitioner Certification
Uqeqesho lwe-PRINCE2 ku-Gurgaon, iNkxaso yePrince2 kwiGurgaon ne-Prince2 I-Certificationer Certification e-Gurgaon
Uqeqesho lwe-Prince2 kuGurgaon
I-PRINCE2® (iiprojethi kwiindawo ezilawulwayo), yindlela yokulawula iphrojekthi esetyenziswa ngokubanzi ehamba ngeendlela ezifunekayo zokuqhuba iphrojekthi ephumelelayo. I-PRINCE2 Ukuqeqeshwa kwabaSebenzi eGurgaon yindlela eguquguqukayo kwaye ijoliswe kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi. Inkqubo ye-PRINCE2® e-Gurgaon ziya kuqhelana nabaqeqeshi ngeli qhe le-standard faction elaphuhlisiwe kwaye lisetyenziswe kakhulu nguRhulumente wase-UK kwaye isetyenziswe kwicandelo labucala ngasemhlabeni. Iquka iindlela eziphambili nezibonakaliswe kakuhle ekulawulweni kweprojekthi. Le khosi iya kukulungiselela kokubili i-PRINCE2® Foundation kunye ne-PRINCE2® kunye neenzuzo zokufumana esi siqinisekiso siya kukhululeka kakhulu kwixabiso le-certified prince2.
Iinjongo ze-PRINCE2 Uqeqesho lwabaSebenzi eGurgaon
Ukuqonda imfuneko yokuphathwa kweprojekthi
Cwangcisa, luququzelele kwaye luphumeze iiprojekthi ze-PRINCE2
Ukuhambisa imisebenzi kunye nokuqhuba iprojekthi ngendlela elawulwayo
Ukulawula imingcipheko ngokufanelekileyo ukwenzela ukuba ayichaphazele iphrojekthi leyo
Qinisekisa ukuba iphrojekthi edibeneyo ihlangabezana neemfuno kunye neenzuzo kumbutho
Abaphulaphuli abafunyenweyoI-PRINCE2 Course Course Course in Gurgaon
ISatifikethi se-PRINCE2 senzelwe abaphathi kunye nabaqeqeshi abafuna ukufumana ubuchule kwiprojekthi yeprojekthi ngokusebenzisa izikhokelo ezithile kunye nezenzo ezilungileyo njengoko zikhankanywe kwi-PRINCE2 standard.
MfunekoI-PRINCE2 Practitioner Certification kuGurgaon
Ixesha loKhutshwa kweNkundla: Iintsuku ze-3
Indlela eCwangcisiweyo yoLawulo lweeProjekthi
Ukubeka umgangatho wendlela ehleliweyo yokulawula zonke iiprojekthi, imigaqo yokuphumelela kwiprojekthi, imodeli yeendlela ze-PRINCE2® kuquka iinkalo ezidibeneyo zemigaqo, iinkqubo, iindatshana kunye nokulungiswa.
Indlela eya kusekelwe kwinkqubo
I-PRINCE2® igxile kwiinkqubo eziphambili ezifunekayo ekulawuleni kwiprojekthi ephumelelayo okumele ibe khona, kodwa inokuthi 'ifakwe' ukubonakalisa ubunzima, ubunzima kunye nobungozi obujongene nalo msebenzi. I-PRINCE2® Inkqubo Yomzekelo iya kusetyenziswa ukunceda abathunywa ukuba baqonde kwaye bayayiqonda into ekumele yenziwe ngayo ukulawula nganye iphrojekthi, kutheni kufuneka kwenziwe kwaye xa kuphila kwiprojekthi yeprojekthi.
Ingxaki yoshishino, iziPhumo, iziPhumo, iziNzuzo kunye neziNcedo, ukuphuhlisa, ukuVinisekisa nokuGcina iNkundla yeBhizinisi; eqinisekisa izibonelelo kunye neSicwangciso sokuHlola seNzuzo
Ukwakhiwa kweqela leProjekthi kunye neBhodi yeProjekthi, Uqinisekiso lweProjekthi, iMenenja yeProjekthi, uMphathi weQela, ukuTshintshisa igunya kunye neenjongo zeProjekthi nenkxaso. Ulawulo lwabachaphazelekayo, iSicwangciso soLawulo loNxibelelwano.
Amanqanaba kunye nomxholo weeNkqubo, iziCwangciso ezingabonakaliyo, Indlela esekelwe kwimveliso yokucwangcisa - Inkcazelo yeProjekthi, ukuKhutshwa kweMveliso, iNkcazelo yeMveliso, Umzobo weMveliso yeMveliso; amanyathelo okucwangcisa i-PRINCE2®.
Ulawulo kunye neSigaba soBugcisa, ukunyamezela nokuKhuphula ngaphandle, iBhodi yeProjekthi kunye noLawulo lweProjekthi yoLawulo lokuHlola nokuBela ingxelo, iiNqununu zokuLawula, ukuBamba kunye nokuBika iingxelo, ukuPhathwa kweziganeko kunye nokulawulwa kwexesha.
Inkqubo yokuLawula kunye noTshintsho, Inkqubo yoLawulo loCwangciso, iSicwangciso soLawulo loCwangciso, isisombululo, ukusingatha ukutshintsha, ukulandelela kunye nokukhusela iimveliso, ukuguqulwa kwamagunya kunye nokuguqulwa kohlahlo lwabiwo-mali.
Umgangatho ochaziweyo, Uvavanyo lweMigangatho yoPhicotho, iMigqaliselo yoMkeleko, iMigqaliselo yeMigangatho, iSicwangciso soLawulo lweMigangatho, ukuQinisekiswa koMgangatho, ukuPhathwa koMgangatho kunye noPhuculo lobuGangatho.
Ulawulo loMngcipheko Nobungozi, Ulawulo lweengozi kwiiprojekthi, iSicwangciso soLawulo lweengozi, iNkqubo yokuLawula ingozi kunye noHlahlo lwabiwo-mali.
Isimo seprojekthi siqhuba lonke ikhosi ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni. Iseti epheleleyo yemisebenzi inokunceda ukubonelela ngokusetyenziswa kwendlela. Imisebenzi emininzi yenzelwe ukunceda abathunywa bekhonkco ngezinto ezine ezidibeneyo ze-PRINCE2® - iMigaqo-nkqubo, iiNkqubo, izihloko kunye nokuPhonononga. Kukho neempendulo zeemviwo zeemviwo zokuthunyelwa kwabathunywa ukuba baqhube phambi kokuba bahlale esihlolweni seSiseko
Imibuzo ye-8 - Imibuzo ye-10 ngombuzo ngamnye, ngamnye ufanele uphawu olulodwa
Amanqaku e-44 okanye ngaphezulu kufuneka adlule (ngaphandle kwe-80 ikhona) - 55%
Iiyure ezimbini neyesigamu (ii-150 imizuzu), akukho xesha lokufunda elongezelelweyo
Vula uvavanyo lweencwadi (i-PRINCE2 incwadi kuphela)